Nanao Ny Dihiny Farany Indrindra Ve Ilay Tsirefesimandidin’i Uzbekistan? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Aogositra 2016 10:58 GMT
Karimov tao Moskoa tamin'ny herintaona. Sary governemanta rosiana, nomena lisansa ho azo zaraina indray.
Heverina ho tena marary tokoa ny filohan'i Uzbekistan 78 taona antsoina hoe Islam Karimov rehefa niditra tamin'ny dingana mbola tsy nirosoana mihitsy hatramin'izay tamin'ny nanamafisana fa nampidirina hopitaly izy tamin'ny 28 aogositra.
Na dia tsy misy aza ny filazalazana ofisialy amin'ny aretiny — ny tsaho no nibitsibitsika fa na tapaka lalan-drà izy na namely azy tampoka ny fony — Ho eo amin'ny faratampon'ny fanamarihana ny tsingeritaona faha-25 nahaleovantena ity firenena Aziatika Afovoany Uzbekistan ity amin'ny herinandro ambony.
Sambany tao anatin'ny 27 taona, tsy eo amin'ny fifehezana an'i Uzbekistan i Karimov.
Tao amin'ny Fergananews.com, izay namoaka voalohany mbola tsy nisy fanamafisana ny fahatapahan'ny lalandrà, efa nanombana ny mety ho fiainana tsy misy ilay lehilahy nitondra ny firenena hatramin'ny talohan'ny nisarahana tamin'ny Firaisana Sôvietika sady heverina ho arkitektan'ny iray amin'ny tsy manaja indrindra ny zon'olombelona eto ambonin'ny tany ny mpaneho hevitra.
Nanoratra i Dnevalni :
Resaka fiavotan'ny ain'i Karimov sisa no resahintsika ankehitriny, satria tsy misy intsony ny fanontaniana ahafahany mbola mitondra ny firenena. Efa vita izy. Tsy afa-miasa toy ny taloha intsony ianao raha sitrana avy amin'izany fahatapahan'ny lalandra izany. Ny mety ho tanteraka kokoa dia mety hisy fifidianana eto Uzbekistan amin'ity mihintsan-dravina ity. Izay no ho fandehany raha toa ka tsy misy mpisandoka handrombaka fotsiny izao ny sezan'ny filoha…
Tsy hita miharihary izay handimby an'i Karimov raha nangidy tampoka ny fifandraisana tamin'ny zanany vavimatoa Gulnara Karimova ka mahatonga an-drazazavavy hotazonina amin'ny trano manokana ao amin'ny firenena.
Karimova, kintan'ny hira pop sady mpamolavola ny fanaingoana ny ranomanitra “princess” izay anaovan'ny mpanao famotorana iraisampirenena fanadihadiana noho ny fanaovana kolikoly tamin'ny mpandraharahan'ny fifandraisandavitra izay nahazo tsena tao amin'ny firenena, no iray amin'ireo endrika fanta-bahoaka ao Uzbekistan malaza ivelan'ny sisintaniny.
Raha tsy manao an'i Karimov ho olona ivavahana tahaka ny hita any Turkmenistan na any Kazakhstan akory aza i Uzbekistan, dia tsy iadian-kevitra fa mifandrohy amin'ilay olona eo amin'ny lafiny maro ny mahaizy azy ilay fitondrana ka atahorana ny isian'ny fahabangana eo amin'ny fahefana sy ny fikorontanana raha vao mandao ny fahefana izy.
Tao anatin'ny taona vitsivitsy farany izay, dia mandihy eo anoloan'ny mpanao gazety sy diplaomaty i Karimov isaky ny Nowruz (lanonan'ny miraalina lohataona marihana ao Iran sy manerana an'i Azia Afovoany) hanaporofoana fa mbola mahavita izy.
Ankehitriny sarotra ny hino fa mbola hahavita handihy indray izy:
Ислам Каримов президент Узбекистана госпитализирован. Это фейк! Президент Узбекистана вечен! 🙂
Nampidirina hopitaly i Islam Karimov, filohan'i Uzbekistan. Hosoka angamba izany. Maharitra mandrakizay ny filoha!